laacibfm.com » Jose Mourinho Oo 10 Sannadood Kaddib Shaaciyey Ereyadii Uu Dhegta U Saaray Pep Guardiol & Ibrahimovic Semi-finalkii Champions League Ee Barcelona vs Inter Milan
Jose Mourinho Oo 10 Sannadood Kaddib Shaaciyey Ereyadii Uu Dhegta U Saaray Pep Guardiol & Ibrahimovic Semi-finalkii Champions League Ee Barcelona vs Inter Milan
Jose Mourinho ayaa toban sannadood kaddib daboolka ka qaatay ereyadii uu dhegta u saaray Jose Mourinho ee uu ku yidhi ciyaartii semi-finalka Champions League ee xili ciyaareedkii 2009/10 ay Inter Milan ku garaacday Barcelona.
Inter Milan oo uu hoggaaminayo Jose Mourinho ayaa maanta oo kale, toban sannadood ka hor waxay lugta labaad ee semi-finalka Champions League ku garaacday Barcelona, iyadoo waliba laga saaray Thiago Motta qaybtii hore oo kaadh cas la siiyey kaddib markii uu khalad ku galay Sergio Busquets.
Jose Mouirnho oo waraysi siinayay wargeyska La Gazzetta dello Sport ee kasoo baxa waddanka Talyaaniga, ayaa waxa la weydiiyey wixii ay uu u sheegay Pep Guardiola markii casaanka la siiyey Thiago Motta, xilligaas oo uu tababaraha reer Spain isku dayayey inuu beddelo taatikadiisa.
“Markii uu Busquets dhulka ku dhacay isagoon miyir lahayn, waxaan si toos ah ugu dhexeeyey kaylka ciyaartoygayagu fadhiyeen, kuwooda iyo goobta casaanka lagu siiyey Thiago Motta.” Ayuu yidhi Jose Mourinho oo intaa ku daray: “Koornaha ishayda, waxaan ka arkay ciyaartoyda kaydka Barcelona oo dabbaal-degaya sidii ay guuleysteen oo kale.
“Guardiola ayaa u yeedhay Zlatan Ibrahimovic si uu ugu sheego taatikadiisa: Taatikadii ay ku wada ciyaari lahaayeen 11 vs 10 ciyaartoy.
“Kaliya waxaan ku idhi ‘ha bilaabin xafaldeynta, ciyaartu weli may dhamaanin’.”
Inter Milan ayaa ciyaartay kubbad difaac ah, sidii uu caanka ku ahaana waxa uu Mourinho goolkiisa horteeda ku jiray baskii lagu yaqaanay iyadoo ciyaartuna ahayd 3-1, ugu dambayntiina waxay la yimaaddeen gool kale oo uu Samuel Eto’o dhaliyey dhamaadkii.